Global Voices teny Malagasy · 1 Febroary 2017
01 Febroary 2017
Tantara tamin'ny 01 Febroary 2017
Afrika Mainty01 Febroary 2017
Azia Atsimo01 Febroary 2017
"Tsy fandraràna ny horonantsary fotsiny io fanapahankevitra tery saina io fa fandraràna ny fahalalahana amin'ny fitenenana sy ny famoronana any Bhutan koa."
Eoropa Afovoany & Atsinanana01 Febroary 2017
Karaiba01 Febroary 2017
Amerika Avaratra01 Febroary 2017
Azia Atsinanana01 Febroary 2017
'Atsaharo ny famonoana ny tambanivohitra izay mamelona ny firenena', hoy ny vakin'ny sora-baventy nandritra ny diabe tamin'ny 20 Janoary nokarakarain'ny vondronà tantsaha sy mpikatroka tany Filipina.
Rosia01 Febroary 2017
Aostralia01 Febroary 2017
"Ny zavatra tsara indrindra azoko atao dia ny asa ho an'ny Teny. Iza no te-hivoaka ary hanao zavatra hafa, rehefa afaka mamonjy ny teninay aho?"
Tamin'nyTalata 24 Janoary, raha nanitsy ny iray amin'ireo tefiny momba ny fiainana manokana, nampihena be ny isan'ny sary nozaraina ho azon'ny rehetra jerena hita tany anaty pejy manokana ny Vkontakte. Tamin'ny talata, raha nanitsy ny iray amin'ireo tefy momba ny fiainana manokana, ny tambajotra sosialy Vkontakte nampihena be ny isan'ny...